I.P. Service and Solution Company Limited မှ Delivery Assistant Cum Sales Assistant | MyJobs
/ Delivery Assistant Cum Sales Assistant
- Prepare, load, unload and deliver the products to customer according to the set targets.
- ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကားပေါ် တင်ခြင်း၊ ချခြင်းနှင့် ဝယ်သူများ၏ဆိုင်နေရာများသို့ ချမှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်အတိုင်း ပို့ဆောင်ပေး
- Making sure that the goods are loaded securely and will not move or get damaged in transit
- ကုန်ပစ္စည်းများ ကောင်းမွန်စွာတင်ဆောင်ခြင်း၊ ပြုတ်ကျခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းများမရှိစေရန် သေချာဆောင်ရွက်ထားရန်။
- Follow routes plan and time schedule.
- Way လမ်းကြောင်း Route အစီအစဉ်နှင့် သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
- Assist in finding the best route for the journey by map reading or any other suitable way.
- အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းမှသွားနိုင်‌ရေးအတွက် မြေပုံရှားပေးခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။
- Assist and guide the van driver in reverse and parking.
- ကားနောက်ဆုတ်ခြင်း၊ ပါကင်ထိုးခြင်း အစရှိသည်တို့တွင် ယဉ်မောင်းအားကူညီပေရန်။
- Maintain and assist sale supervisor relating stock in the vehicle.
- ယဉ်ပေါ်မှကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်ထိမ်းသိန်းမှု၊ ထားသိုသိမ်းဆည်းမှုတို့တွင် အရောင်း Supervisor အား ကူညီဆောင်ရွက်ရန်/
- Inspect and taking care of vehicle and its stock
- ယဉ်နှင့်ယဉ်ပေါ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဂရုစိုက်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်။
- Get the POD (Point of Delivery) signature from customers and manage the whole point of sale process.
- ဖြန့်ချီမှု စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်များ၏လက်မှတ်များ စသည် ဖြန်ချီမှုကိစ္ဏတရပ်လုံးအား စီမံဆောင်ရွက်ရန်။
- Collect cash payments and manage daily cash transferring to company through bank transaction or in person to designated person.
- အရောင်းငွေလက်ခံခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီသို့နေ့စဉ်ပြန်လည်လွှဲအပ်ခြင်း (ဘဏ်ငွေလွှဲ သို့မဟုတ် အခြားသတ်မှတ်ထားသောနည်း) များ ဆောင်ရွက်ရန်။
- Assist in handling of customer feedback, report it and resolve clients’ complaints whenever necessary.
- လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း Customer များ၏ မေးခွန်းများ၊ စောဒကများနှင့် သတင်းပေးပို့မှုများကို အထက်အရာရှိသို့ တင်ပြ၍ ညွှန်ကြားထျက်အတိုင်း ဖြေရှင်းခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်။
- Keep up to date with product information and Inform, explain, educate customers about the products and services whenever necessary.
- မိမိတို့ ကုန်ပစ္ဏည်း၏ နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူထးပြီး လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း Customer များကို သတင်းပေးခြင်း၊ ရှင်းပြခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်။
- နေ့စဉ်ဖြန်ချီမှုစာရင်းအပ်ခြင်း၊ စာရင်းချုပ်ခြင်းများ နေ့စဉ်အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်တင်ပြရန်။
- Giveahand in cleaning of the vehicle.
- ယဉ်သန့်ရှင်းရေးတွင် အခါအားလျော်စွာ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။
- Assist and supports customer needs and wants.
- Customer လိုအင်နှင့် လိုအပ်ချက်များ ထောက်ပံ့ကုညီဆောင်ရွက်ရန်။
- Build good relationship with customer.
- Customer များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားရန်။
- Seek and report necessary market information and data from customer and market.
- လိုအပ်သော ဈေးကွက်အခြေအနေများ၊ သတင်းအချက်များကို Customer များ၊ ဈေးကွက်များထဲမှ စုဆောင်းရှာဖွေရန်နှင့် တင်ပြရန်။
- Perform other related jobs assigned by Sales Manager.
- အရောင်းမန်နေဂျာမှ ပေးအပ်သော အခြားသက်ဆိုင်ရာ အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ရန်။
- At least high school educational level. Graduate will be added advantage
- အထက်တန်းအဆင့် ပညာရေးအဆင့်ရှိရမည်။
- Experience in FMCG delivery service will be added advantage
- FMCG ဖြန်ချီရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
- Familiar or quick learning skills of assigned territory’s roads, streets, retails shops, routing plans, etc..
- Supportive minded and willing to work as team player
- Required good attitude, good Personality, enthusiastic and self-motivation
- Require good health and body fitness level as the job required to walk, stand, lift up products daily.
- ကူပစ္စည်းသယ်ခြင်း၊ သယ်ယူစဉ် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ လမ်းလျောက်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ၊ ခန္ဓာကိုယ်သန်စွမ်း သူဖြစ်ရမည်။
- Able to spendalot of time sitting in the van during long journeys.
- ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းတွင်အတူလိုက်ပါရမည်ဖြစ်၍ ကားပေါ်တွင် အချိန်ကြာကြာထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- Others skills such as strong interpersonal, communication, active listening, detail orientation, etc..